Finland: Taageerayaal Cudud Wayn leh oo ku Biiray Xisbiga KULMIYE Laantiisa Finland - Wargane News
Home Somali News Finland: Taageerayaal Cudud Wayn leh oo ku Biiray Xisbiga KULMIYE Laantiisa Finland
Taageerayaal miisaan culus leh oo ay hoggaaminayso Marwo Saamiya Sheekh oo xilal kala duwan ka soo qabatay xisbiga UCID, markii u dambaysayna ahayd La-taliyaha arrimaha dibada ee NEW UCID, ayaa si buuxda ula midoobay xisbiga KULMIYE laantiisa dalka Finland.
Xaflad ballaadhan oo soo dhawayn xisbiga KULMIYE u sameeyey masuuliyiinta iyo taageerayaasha ka soo digo-rogtay xisbiga UCID, ayaa lagu bogaadiyey xoogga cusub ee ku soo biiray xisbal-xaakimka Somaliland.
Guddoomiyaha Garabka Haweenka xisbiga KULMIYE ee Laanta Finland Marwo Hodan oo ka mid ah xubnaha firfircoon ee kartida iyo dadaal badan galiyey xisbiga, ayaa hadal hambalyo mahadcelin ah ku qaabishay taageerayaasha cusub.
Sidoo kale waxa iyaguna halkaa ka hadlay masuuliyiin tira badan oo mid kastaaba aad u bogaadiyay xafladda iyo taageerayaasha cusub ee ka mid noqday xisbiga KULMIYE curashada sannadka cusub ee 2017.
La-taliyaha arrimaha dibada ee xisbiga UCID Marwo Saamiya Sheekh, ayaa iyaduna madasha ka jeedisay khudbad siyaasadeed u badan sarbeeb iyo duux-xul ay kaga warrantay sooyaalkeedii siyaasadeed iyo sababaha ay u dooratay xisbiga KULMIYE, isla markaana waxay tilmaantay in aanay ka jirin Somaliland xisbiyo mucaarad leh aragti ka fiican ama ka duwan ka KULMIYE.
Ugu dambayntii, Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE laantiisa Finland Md. Axmed Khaliif, ayaa halkaas uga mahadcelin iyo hambalyo uga soo jeediyey dhammaan martida ka qaybgashay xafladda, waxaannu si gaar ah u soo dhaweeyey taageerayaasha cusub ee la midoobay xisbiga KULMIYE oo uu ku tilmaamay inay cudud, caqli iyo cilmiba ku soo kordhin doonaan xisbiga, kuwaas oo yimi xisbi aan la kala xigin oo ay ummadda reer Somaliland u simanyihiin, kuna wada midaysan yihii.
Waxa kaloo uu xusay in xisbiga KULMIYE yahay mid sooyaalka taariikheed ee Somaliland ay qori doonto, maadaama uu noqday xisbigii horumarka iyo waxqabadka, kaasi oo ay ku hoggaaminayaan raggii dalkooda naftooda u soo huray oo ay hormood u yihiin Madaxweynaha hadda xilka haya Md. Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Guddoomiyaha KULMIYE, ahna murrashaxa Madaxweynaha ee hadda Md. Muuse Biixi Cabdi.